Roobootiin akkamitti Namaan haasawa? - NuuralHudaa
Last updated Feb 26, 2018 862
Sa’udiin Addunyaa irratti yeroo jalqabatiif Robootiif lammummaa kennite.
Kora Investimentii magaalaa Riyaad keessatti qophaaye irratti Robotiin namaan walii waliigaltu, ummatatti haasayaa oolte. Robootiin Soofiyaa jedhamtee moggafamte tun, kaampaanii Teknolojii Hong Kong kan Hanson Robotics jedhamuun tolfamte. Waltajji korichaa san irratti fuula namaa ilaaluun namni sun miira akkamii keessa akka jiru hubachuu kan dandeettu tahuu mirkaneessitee jirti. Geggeessaan waltajjii Andrew Ross Sorkin, yaada qabdu akka ibsituuf Sophiyaa kan gaafate yoo tahu, Sofiyaan akki jette “ilma namaa waliin jiraachuu fi hojjachuu barbaada, kanaaf ammoo miira namaa hubachuu barbaada, miira namaa hubachuun salphatti akka namaan walii galuufi ilmi namaa akka na amanu nagargaara” jette.
Soophiyaan, “Robootii ta’uu kee ni hubattaa, akka ilma namaa yaaduu ni dandeessa?” jechuun gaafii isii dhiyaateef yoo deebisa kennitu; “hayye mee anis gaafii kana deebisee sihaagaafadhuu, ati hoo ilma namaa ta’uu kee akkamiin beekta?” jetteen.
“qaroomina nam tolchee (artificial intelligence) kootiin ilma namaa jiruu fooyya’aa akka jiraatu ni gargaara; fakkeenyaaf mana fi magaalaawwan jireenyaaf mijaawaa ta’an dizaayin gochuu keessatti hirmaachuu fedha” jechuun dubbatte.
Qaroominni Roobootii kanaa mootummaa Sa’udii Kan hawate yoo tahu, battalumatti Lammummaan biyyattii kennameef.
Sofiyaanis lammummaa argattetti akka gammaddefi kabajaanis kan isitti dhagahame tahuu erga dubbattee booda “lammuumma Robootii kenname kun addunyaa irratti kan jalqabaa tahuun anaaf seena qabeessa” jette.
ROOBOOTIIN AKKAMITTI YAADUU DANDA’A? Akkamitti namaan haasayuu danda’a?
Kun Ajaa’iba guddaa miti. telefoona kee banii laali. yoo iPhone qabaatte, Home button qubaan dhiibii qabii “Hey Siri” jedhiin. waan feete gaafadhu. waan dura keessatti qindeeffame yoo tahe sii deebisa. fakkeenyaaf sa’aa gaafachuu ni dandeeysa. guyyaafii haala qilleensaa. waan interneeta irra jiru hunda siif hima. kana jechuun akkuma waan barreeffamaan google gaafachuuti. computerri waan keessatti katabame yoo search jetteen ol sii baasa. akkasuma telefoona androidis yoo qabaatte home button dhiibii qabii “OK Google” jedhiin. telefoona android hedduu irratti ni dalaga. dalagaan kun command computeraatiin dalaga. nama ogummaa computaraa qabuuf waan ajaa’ibaatii miti. kan roobootii kanaatis akkasuma. wanti addaa, sosochii hidhiitiifi sagalee bahu wal fakkeeysuudha. kunis teknoolojii dhiheenya dhufe. garuu Mechanical godhutu ulfaata. Walumaa galatti roobootiin kun Ajaa’iba guddaa miti.
Roobootiin kun akkamitti sagalee baasuu dandahe?
Afaan isaa keeysa Ispiikaratu jira. ija isaa keeysa kaameratu jira. gurra isaa keeysa Maayikitu jira. kana jechuun, akkuma telefoonni Speaker, Mic, Camera qabu. kunis meeshaa kana hunda ni qaba. meeshaalee kanniin roobootii qaama namaa fakkaatu hojjatanii keeysatti qindeeysan. dubbiin gabaabduudha. waanuma laaftutu ajaa’iba fakkaata.
Meeshaan kun AMAAZOON IKOO DOOT (Amazon Echo dot) jedhama. boca ilma namaa hin qabu malee roobootii Soofiyaa jedhamu kana caalaa haala addaatiin hojjata. meeshaalee elektrooniksii SMART tahan, kan akka Smart TV, Smart Bulb, Smart Phone fii meeshaalee akkanaa hunda wajji yoo wal qabsiisan, waan sagaleen ajajan hunda ni hojjata. “Alexa, Turn off the light” yoo jedhaniin ifaa dhaamsa. ibsi jennaan ni ibsa. TV bani yoo jedhaniin ni bana. waan isa wajji wal qabatu hunda ni dalaga. nama muuziqaa dhageeyfatuuf Muuziqaa bana. inumaahuu haala nama sanii qoratee haala saniin qindeeysaaf. fakkeenyaaf Muuziqaa namni sun yeroo heddu ganama ganama dhageeyfatu qoratee qopheeysa. ka inni galgala dhageeyfatus ni qorata. yeroo inni woca hin feenes ni qorata. sa’aa namni sun itti rafuufi sa’aa inni hirribaa ka’u hunda qoratee, ganama yoo inni hirribaa ka’u muuziqaa inni yeroo heddu dhageeffatu san banaaf. sa’aa inni woca hin feenetti waan hunda irraa cufee usa. waan namni sun yeroo heddu dalagu qoratee irra deebi’ee dalaga. kanuma wanti Roobootii.
May 18, 2022 sa;aa 6:05 am Update tahe